ကြ ယ်တွေမရှိတဲ့ ကောင်းကင်ကို ချစ်နိုင်ပါရဲ့လား ⋆ Popular
ရှားပါးလှတဲ့ ညတိုင်းမှာ သတိ ရမိတဲ့ ကဗျာလေးရှိပါတယ်။ ကဗျာ ကိုမပြောခင်မှာ ‘ပိုချစ်တဲ့သူ ကိုယ် ဖြစ်ပါရစေ’ဆိုတဲ့ စကားလေးကိုတော့ အားလုံးသိနှင့်ပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီစကားလေးဟာ ချစ်ရသူတွေ ကြား တစ်ချိန်က အတော်လေး ခေတ်စားခဲ့ဖူးတယ်ရှင့်။ အများစု သတိထားမိလိုက်တာကတော့ စာ ရေးဆရာမကြီးဂျူး ရေးသားတဲ့ စာ အုပ်မှာ ကဗျာဘာသာပြန်အနေနဲ့ ပါရှိခဲ့တာက စတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ထိအောင်လည်း ကြိုးကြား ကြိုးကြား သုံးနေ၊ ပြောနေတုန်းပါ။ ဒီစကားလေးရဲ့ မူရင်းကတော့ ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှ W.H.Auden ရေး သားခဲ့တ The More Loving One (ပိုချစ်ပေးနိုင်သူ)ဆိုတဲ့ ကဗျာထဲက ဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာဆရာဟာ အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို လူလတ်တန်းစားမိဘနှစ်ပါးကနေ ၁၉ဝ၇ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်၊ အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ်၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် မှာ သူကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကဗျာ တွေဟာ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံနဲ့ ဆက် နွှယ်ပြီး လှပအောင်လည်း တန်ဆာ ဆင်ရေးသားနိုင်တာမို့ စာဖတ်သူတို့ အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့တယ်။ သူရေးသားခဲ့ တာနိုင်ငံရေး ၊ လူမှုကျင့်ဝတ်/ဝန်းကျင် ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တို့အထိ ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူဟာ ပူလစ်ဇာဆုကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် မှာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားပြီး ချိန်မှာတော့ သူ့ကဗျာတွေဟာ ပိုလို့ တောင် လူသိများခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင် တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ နာမည်ကြီး သ တင်းမီဒီယာတွေမှာ ပိုမိုထည့်သွင်း ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း သိပ်ကို လူသိ များခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကဗျာလေးကို ဖတ် ကြည့်ရအောင်ပါရှင်။
indifference is the least
We have to dread
from man or beast.
ငါ ငရဲပဲကျကျ သူတို့ကတော့ ခပ်မဆိတ်ပဲရယ်
ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာဆိုတော့လည်း သူတို့ခပ်မဆိတ်နေမှုဟာ ဂရုထား စရာအနည်းဆုံးသာ ဖြစ်ရတယ်။
လူတွေအတွက် သားရဲကောင်တွေ အတွက်နဲ့ ငါတို့မှာ ပူပန်နေလိုက် ရတာ ဆိုတာလေ . . .
How should we like it
Withapassion for us,
we could not return?
တကယ်လို့များ ကြယ်လေးတွေဟာ ငါတို့ကို ချစ်မြတ်နိုးနေပါလျက်
ဖြစ်ပါရစေတော့ . . .
Of stars that do not
အခုတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ငါ သိလိုက်ပြီ
သိပ်ကို ငါ လွမ်းနေမိကြောင်းဖြင့်
Were all stars to
disappear or die,
ကြယ်တွေအားလုံး ပျောက်ချင်လည်း ပျောက်ပေါ့ သေရင်လည်းသေပေါ့၊
ငါကတော့ ဗလာ ကောင်းကင်တောင် ကြည့်နေတတ်ဖို့ သင်ကြားပြီ။
ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေတာကို လည်း ရင်သပ်ရှုမော ငါဟာခံစား တတ်မယ်
ငါ့မှာ ယူရမှာပေါ့ကွယ်။ ။
ကဲ ကျွန်မအမြင်ကတော့ သိပ်လှပတဲ့ ကြေကွဲစာနာစရာ ကောင်းလှတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။ ကိုယ်ချစ်တာ ကိုယ်ရှိတာကို အသိ အမှတ်ကို မထားပေးတဲ့ ချစ်ရသူကို ကောင်းကင်ထက်က ကြယ်စင်လေး၊ ရှိရှိ/ မရှိရှိ ချစ်နေဖို့ ကိုယ့်ဘာသာ သင်ကြားလိုက်ပါတယ် ရယ်လို့ ဆိုထားပုံလေးကိုက ကဗျာဆရာ ဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း ‘ချစ်ခြင်းရယ် မတူမျှနိုင်မှတော့ ပိုချစ်ရသူ ကိုယ် သာလျှင်’ ဖြစ်နေနှင့်ပါကြောင်းသာ သူ့ထံပါး အမှာပါးလိုက်ချင်ပါတော့ တယ်ရှင် ။
ရေထဲကငွေ ၊ ငွေထဲကရေ